Shahaadooyinka iyo Jailbreak, waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato | Wararka IPhone
Shahaadooyinka iyo Jailbreak, waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo dhan
Wararka IPad | | Cydia, macruufka 9
Burcad badeedda Pangu waxay go'aansadeen inay wax ka dhigaan sida ugu macquulsan samaynta macruufka 9.3.3 Jailbreak fowdo dhab ah oo dadka isticmaala ma garanayaan sababta si lama filaan ah ay Jailbreak fashilmay, sida loo hagaajiyo iyo waxa ay tahay in la cusboonaysiiyo shahaadada si ay u awoodaan inay Jailbreak. Waxaan u dhaqaaqi doonaa tallaabo-tallaabo, annagoo sharraxaya Maxay tahay tan ku saabsan shahaadooyinka, maxay tahay sababta qaar loo cusbooneysiiyo kuwa kalena aan loo cusbooneysiin, si aad ugu dambeyntii u ogaato waxa uu ku saabsan yahay Jailbreak in asxaabteena ka timid Pangu ay naga tageen, oo hadaad wali rabto inaad isticmaasho, ogow sida ay u shaqeyso si looga fogaado dhibaatooyinka.
1 Maxay yihiin shahaadooyinka
2 Shahaadooyinka iyo Jailbreak
3 Laba hab, laba shahaado.
4 Qaabkee loo adeegsadaa?
Maxay yihiin shahaadooyinka
Shahaadooyinka ayaa lagama maarmaan u ah inay awoodaan inay saxiixaan codsiyada oo markaa ku dhejiyaan iPhone ama iPad. Shahaadooyinkan waxaa si toos ah u bixiya shirkadda Apple, lagumana abuuri karo (aragti ahaan), sidaa darteed ma jirto qaab kale oo lagu helo. Waxaa jira saddex nooc oo shahaadooyin ah:
Bilaash: ugubkan waxaa soo saaray Apple waqti aan fogeyn sidaa darteed qof kasta oo adeegsada Aqoonsiga Apple wuxuu ku rakibi karaa codsiyada aaladooda, isagoon u baahnayn koonto sameeysa, sidaas darteedna, isagoo aan lacag bixin. Shahaadooyinka aan ku heli karno akoonadan bilaashka ah waxay dhacayaan 7 maalmood, ka dib markaa dalabkii aan rakibnay uu joojinayo shaqadiisa, waa inaan soo saarnaa shahaado kale oo aan dib ugu rakibnaa barnaamijka aaladdayada.
Horumar shakhsiyeed: Kani waa koontada horumariyaha "caadiga ah", Waxaa lagu qiimeeyaa $ 99 sanadkii iyo shahaadooyinka aan lahelno sanadkii ugu dambeeyay. Waqtigaas ka dib, waxay u dhacdaa sidii kiiskii hore: waa inaad cusbooneysiisaa shahaadada oo aad dib u dhigtaa arjiga aan kula saxiixnay.
Horumar ganacsi: Waa midka ay isticmaalaan shirkadaha waaweyn ee wax horumariya, Waxaa lagu qiimeeyaa $ 299 sanadkii, iyo sida shaqsiga, shahaadooyinkiisa waxay soconayaan hal sano, ka dib taas waa inay cusbooneysiiyaan.
Shahaadooyinka iyo Jailbreak
Maxay shahaadooyinkani ku xidhayaan jebinta qalabkayaga? Waa hagaag waxa Nidaamku wuxuu ku lug leeyahay rakibidda codsi ku saabsan taleefankayaga iPhone-ka, tanna waa inaan horay u saxiixnaa. Taasi waa meesha shahaadadu ka ciyaarto, waxayna kuxirantahay nooca shahaadada loo adeegsaday, arjigaas wuxuu joojinayaa inuu shaqeeyo 7 maalmood ama sanad kadib marka la rakibo. Anaga oo maanka ku hayna in markasta oo aan dib u bilawno aan "waayi doono" Jailbreak waana inaan u isticmaalnaa arjiga si aan mar kale u soo ceshano, waa lagama maarmaan in arjigaasi shaqeeyo, markaa mar haddii shahaadadu dhamaato, waa in la cusbooneysiiyaa dib loo rakibay Sidaa awgeed muhiimadda ay leedahay shahaado aan isticmaalno.
Laba hab, laba shahaado.
Waqtigan xaadirka ah waxaan haynaa laba qaab oo aan ku xirno: asalka, oo Shiineys ah oo kaliya loogu talagalay Windows, kaas oo ku rakibaya barnaamijka «PP» taleefankayaga iPhone-ka ah ama Ipad-ka, oo adeegsanaya shahaado ganacsi oo socota hal sano. Kadibna qaabkii kale ayaa soo baxay, oo loo turjumay Ingiriisi, sidoo kale waxaa loo heli karaa Windows, Mac iyo Linux, iyadoo la adeegsanayo Cydia Impactor, oo adeegsata koontada aad tilmaamayso inay ku soo saarto shahaadada.
Iyada oo la nooca Shiinaha, Adoo adeegsanaya shahaadada ganacsiga waxaan hubineynaa in arjiga PP ee rakibmay uu socon doono sanad dhan, sidaa darteed waxaan ku hilmaami karnaa inaan wax cusboonaysiinno. Waxaan kaliya maskaxda ku haynaa inaan nahay Semitethered, markaan dib u bilawno waa inaan dib u socodsiinaa arjiga PP markale si Cydia ay si sax ah markale ugu shaqeyso. Xitaa haddii Apple ay ka noqoto shahaadadan shirkadda, ma saameyn doonto kuwa horeyba u haystay barnaamijka PP ee ku jira iphone-kooda, kaas oo socon doona sannad aan loo eegayn waxa dhaca. Xaqiiqdii, waxay horey ugala noqotay shahaadadii hore, tii loo adeegsaday nooca 1.1, Pangu waxay sii deysay nooca 1.2 oo wata shahaado cusub.
Iyada oo la Ingiriisiga Pangu isticmaal koontadayada Apple. Haddii aan nahay horumariye wax dhibaato ah ma jiri doonaan, maxaa yeelay adoo adeegsanaya koontadayada horumariyaha waxaan soo saari karnaa shahaado soconeysa hal sano, laakiin haddii aan isticmaalno koonto aan ku jirin barnaamijka horumariyaha, 7dii maalmoodba mar waa inaan ku celcelinaa habka aan u saxiixay arjiga, ku rakib iPhone-kaaga oo mar kale u orod si ay Cydia u shaqeyso.
Qaabkee loo adeegsadaa?
Labada habba waa la isugu soo koobay, taas oo ah, dib u dhis kasta, arjiga (PP ama Pangu) waa in mar kale loo adeegsadaa si Cydia ay u shaqeyso. Marka, waxa na daneynaya ayaa ah in codsigan (PP ama Pangu) uu soconayo ilaa iyo inta suurtagal ah, sidaa darteed jawaabtu way cadahay: waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho habka asalka ah, xitaa haduu yahay shiineys iyo kaliya Windows. Waxaad kuheleysaa casharka oo dhameystiran maqaalkan iyadoo fiidiyow lagu daray. Xitaa haddii aad horumar tahay, oo sidaas darteed waxaad abuuri kartaa shahaado shaqeyneysa hal sano, miyaad siin lahayd xogtaas Pangu? Taladaydu waa maya ... laakiin qof kasta oo ku hoos shaqeeya masuuliyaddiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » Shahaadooyinka iyo Jailbreak, waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo dhan
Burcad badeedda 'pangu' waxay "cadaab ku foorarsadeen" inay waxyaalaha qasaan ...
Waa in faallooyinkaagu magac lahayn. Ixtiraam la’aan, is-hoosaysiin, u damqasho iyo dheer iwm.
Waxaad noqotay sidii qof aan la soo bandhigi karin !!
Waxa ugu yar ee aad sameyn kartid waa inaad hesho maqaal kale oo raali gelin ah.
Taasi haddii aan ahaan lahaa kuwa ka socda pangu oo aan aqrin lahaa faalladaada, waxaan si toos ah u xiri lahaa chiringo oo xabsiga ayaan ku haysan lahaa oo waxaan u diri lahaa dhagaxa si dabayl u qaaddo abaalgud la’aan darteed !!
Haddii aad caqli badan tahay maxaad u heli weyday xabsi "fudud"?
Qofka kaliya ee aan ixtiraam lahayn halkan waa adiga. Waxaan muujiyey ra'yigeyga oo keliya anigoon ugu yeerin qof aan la sheegi karin, wax u muuqda inaadan aqoon sida loo sameeyo. Kahor intaadan bixin casharada is-hoosaysiinta, baro inaad ixtiraamto ra'yiga dadka kale.
Waa in la dhaho: "waxay ku adkaysteen inay wax qasaan" waa gabi ahaanba ixtiraam la'aan shaqada dadka kale.
Laakiin waxaan arkaa inaad heysato hoos-u-dhac eber ah, laakiin dabcan durba waan fahmay wax walba, ma tihid saynisyahan kombiyuutar. Sida ku cad astaantaada, waxaad tahay dhakhtar. Ha noolaato galitaanka foosha.
Maaddaama aanan dhakhtar ahayn, ma bixin karo tusaale ahaan naqdinta xirfadda qaabka aad ku sameyso kuwa pangu. Waa waxa aan ra'yi ka haysan waxyaabaha aan la aqoon. Dhamaan wanaag.
Ma iila hadashaa xushmad iyo khushuuc? Waxaan ku dhajinayaa faallo adiga kugu saabsan oo ku saabsan cusbooneysiinta WhatsApp:
Waan ka daalay macno darrada ku jirta wararka cusbooneysiinta laba x saddexdiiba mar !!!
Iyagu waa koox budhcad ah, ama waad cusboonaysiinaysaa ama sheekooyinkaaga ayaa la afduubay iyada oo aan suurtagal ahayn in la helo ama la akhriyo farriin murugo leh.
Waa argagixiso !! Wuxuu u baahday inuu soo diro mid fudud: "Waxaan ku imid 5 daqiiqo." Oo waxaan helayaa ogeysiiska ah inaan cusbooneysiiyo !! Hooyada p…. !!! Iyo badhtamaha wadada weyn !! Waxaan ka faa'iideysan lahaa wareega wareega oo markaan imaado jawaabta pumbaa !!! Ogeysiiska cusboonaysiinta dhimashada !!
Waxaan rajeynayaa in wasak quusin oo lagu badalay wax laga fikiray iyo dadka caadiga ah oo aan ahayn koox farabadan oo ciyaartooy ah pokemon !!!
Waxaan u maleynayaa inaan loo baahnayn in waxbadan la qoro ...
Ninyahow, oo saw maaha? Ilaa intaan ogahay, kuwa qashinka ah kuma shaqeeyaan bilaash. Waxay ahayd inaan bixiyo wasakhda, ergo Waxaan xaq u leeyahay inaan dalbado.
Hadda, haddii ay gebi ahaanba bilaash ahayd, oo ay sameeyeen carruurta qaarkood oo aan dinaar ku kasban, markaasaan afkayga xidhay oo aan qabtay.
IOS 5 Weligiis ayaa yidhi
3 sano ka hor
Wasap ???… marka laga reebo "miyir beel"… DAMEERKA adigoon Dameerkii xumeyn.